Gaziray Taken dhulka hoostiisa ... Shaqooyinku way bilaabeen | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia27 GaziantepGaziray Taken Alar Alar Shaqooyinka dhulka hoostiisa ayaa Bilaabmay
11 / 12 / 2019 27 Gaziantep, Tareenka Tareenka, tareenka, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY
shaqooyinka dhulka hoostiisa gaziray ayaa la bilaabay
Gaziray qaadataa dhulka hoostiisa… Hawlaha ayaa bilaabay; Xarunta Kongareeska Dhaqanka-Xaafadda Zeytinli, Xaafadda Mujahideen-Budak iyo Isbitaalada-Hoteellada waxay mari doonaan khadka 5-kilomitir ee bilaabay inuu ka shaqeeyo dhulka hoostiisa.
Gaziray, oo loo hirgaliyay xalka dhibaatada gaadiidka ee Gaziantep, ayaa la soo gabagabeeyay dhamaadka. Gaziray ayaa neefsan doonta gadiidka magaalada, Xarunta Magaalada, Warshadaha Yar yar (KÜSGET) iyo Gaziantep Aagga Warshadaha Aasaasiga ah ayaa isku xiri doona. Miisaaniyadda TL 1,5 bilyan iyo 25-kiilo mitir dhererkeedu yahay 16-kilomitir gaadiid, mashruucu wuxuu siin doonaa 150 kun oo shaqaalaha warshadaha ah gaadiid ka raaxo badan, dhaqso iyo jaban.
95 QARAAMIKA GAZİRAY WAA ok
Duqa Degmadda Gaziantep Fatma Sahin, oo ka mid ah mashruucyada mega ee Mashruuca Gaziray 95 boqolkiiba ayaa la dhammaystiray. Si looga hortago saamaynta caqabad ku noqoshada khadka khadka inta lagu guda jiro marinka magaalada mashruuca, shirkada qandaraaska sameysay, oo ku guuleysatay qandaraaska natiijada qandaraasleyda in ay qaaddo qadka 5km ee dhulka hoostiisa, ayaa bilaabay howlahan. Qaybta sare ee wadada waxay noqon doontaa aag cagaaran, wado baaskiil iyo waddo weyn. Waxaa jiri doona 4 saldhig metro oo wadada ku yaal. Markii la dhammaystiro mashruuca, tirada rakaabka ee ay qaadayaan Gaziantep ee nidaamka tareenka ayaa sii kordheysa waxaana la gaari doonaa gaadiidka deegaanka, dhaqaalaha iyo nabadgelyada. Mashruuca Gaziray Commuter Line Fatma Sahin oo dib u eegis ku sameynaya goobta, ayay mas'uuliyiintu heleen xog.
KU SAABSAN MASHRUUCA GAZERAY
Iyada oo la raacayo borotokoolkii u dhexeeyey Dawladda Hoose ee Magaalada Gaziantep iyo TCDD Maajo 22, 2014, dhismaha Gaziray Suburban Line project wuxuu bilaabmay 13-ka Febraayo 2017.
Qorshaha Masterka Gaadiidka Gaziantep (GUAP) waxaa lagu fuliyay qaab dhismeedka shaqada, khadka tareenka ee hadda socda oo maraya Gaziantep, marinka magaalada ma ogolaanayo adeegsiga degdegga ah ee dadka lugeynaya iyo wareega gaadiidka, gobolka wuxuu abuuray saameyn caqabad leh. Wadada, Xarunta Koongareeska Dhaqanka - Zeytinli Neighborhood, Mujaahid Budak Deriska, Cisbitaalada-Hoteellada Hoteelka si loo helo marin badbaado leh dadka lugeynaya iyo gaadiidka iyo saameynta xanibaada si loo baabi'iyo 4ta qaybood ee isbarbar socda ee afarta xariiq ee isbarbar socda ayaa lagu dhigi doonaa habka furitaanka.
Sayidka; Saamaynta caqabada ayaa laga ciribtiri doonaa aag qiyaastii 200 kun oo mitir murabac ah ayaa magaalada loo heli doonaa. Baaxadda Gaziray hindisada; 11 qaab-farshaxan ayaa la sameyn doonaa. Qorshaha Masterka Gaadiidka Gaziantep; Tixgalinta ku habboonaanta is dhexgalka noocyada kala duwan ee gaadiidka marka loo eego halka ay ku taal saldhigga tareenka, aaggan ayaa noqon doona xarunta wareejinta. Qaabka isticmaalka dhulka ayaa mari doona isbedelo waaweyn oo la xiriira go'aamada qorshaha aagooyinka, gobolkuna wuxuu u noqon doonaa meel muhiim ah isbadalka magaalooyinka.
Degmada Gar-adag; Marka la eego baaxadda shabakadda gaadiidka dadweynaha ee qorshaysan; Is dhexgalka khadadka Gaziray iyo Khadad Xawaare Sare ah, Khadad metroolo, Dhismaha Basaska, Baarkinka dhulka hoostiisa ah iyo Taksi ayaa la bixin doonaa. Xarunta wareejinta Gar Main ee 2030 ugu yaraan 877 kun 540 rakaab ah ayaa la daabuli doonaa. Isgoysyada 25-mitir ee dadka lugeynaya ayaa lagu sameyn doonaa baaxadda Xarunta Gaziray.
Tareenka Zeytinburnu waa dhul hoose
Khadka Tareenka wuxuu ka hooseeyaa Zeytinburnu
Mashruuca Gaziray wuxuu u shaqeeyaa si loo kobciyo
Mashruuca Ka Hortagga Isgaadhsiinta Eskişehir YHT
Gaziray Helitaanka dhulka hoostiisa